ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကလေးတွေကို ကယ်တင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ဦး !!! - JAPO Japanese News
ဂါ 21 Sep 2021, 15:13 ညနေ
ဂျပန်စီးပွားရေးဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သောခေတ်ကကုန်လွန်သွားတာဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။
စီးပွားရေးအတိုင်းအတာမှာတော့ အမေရိကန်ပြီးရင်ဂျပန်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့၊ တရုတ်ကကျော်တက်သွားပြီး အဆင့် ၃ ကိုရောက်သွားတယ်။
အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးမကျဆင်းမီအချိန်အတွင်းမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုက ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး၊ ဆင်းရဲသားဦးရေကတိုးလာပါတယ်။
ဥပမာဂျပန်ဆိုရင် ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ပျမ်းမျှကိုတွက်ချက်ပြီး၊ အဲ့ဒါထက်ဆင်းရဲတဲ့လူကို နှိုင်းရဆင်းရဲနွမ်းပါးသူလို့ခေါ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆို၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရဲ့ဝင်ငွေက ယန်း ၁၂၇ သောင်းအောက်ကိုနိမ့်ရင် နှိုင်းရဆင်းရဲနွမ်းပါးသူလို့သတ်မှတ်ပါတယ်.
ဂျပန်ကလူနေမှုစရိတ်လည်းရှိပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်မားတဲ့အတွက် ဒီငွေပမာဏနဲ့ဆို တော်တော်လေးကြပ်တည်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာကြောင့်၊ ၁၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဒီနှိုင်းရဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာရှိနေပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ၆ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က ဘဝနေထိုင်မှုခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့သဘောပါ။
ဖွံ့ဖြိုးချိန်ရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အစားအသောက်အလုံအလောက်မရရှိတဲ့ကိစ္စတွေ များပြားလာပါတယ်။
ဒီဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်းဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ ၃၅ နိုင်ငံထဲမှာ ဂျပန်ဟာနံပါတ် ၇ မှာရှိနေပြီး၊ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံထဲမှာတော့ နံပါတ် ၂ နေရာမှာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ရောက်ရှိနေပါတယ်။
စကားမစပ် G7 မှာ အဆိုးဆုံးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ အချို့ကအရမ်းချမ်းသာနေကြသလို၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးအလွှာကလည်းများပါတယ်။
ဂျပန်ကလူတိုင်းတန်းတူပဲ ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှတ်ချက်ပေးခံရတာကတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကိစ္စလို ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအထဲမှာ ဆင်းရဲပြီးခက်ခဲနေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ဦး ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
Saitama စီရင်စုမှာရှိတဲ့ Tsukuba တက္ကသိုလ်နှင့်တွဲဖက်ထားတဲ့ Sakado အထက်တန်းကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ Hishinuma Yukiho ဆိုတဲ့အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး….။
သူမဟာ မိဘတစ်ဦးတည်းရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုက ကလေးတွေကိုကူညီပေးမယ့် အိမ်ထောင်စု ၃၀ စာ Food Pantry ဆိုတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။
“ ကလေးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြေရှင်းပေးချင်တယ်။”
ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ Food Pantry နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး Hishinuma ဟာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလား?ဆိုပြီး သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့၊ အထက်တန်းကျောင်းသူက တကယ်ကြီးလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး သူမကိုခွန်အားလျော့မယ့်စကားတွေ ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်မလျှော့ဘဲ လူကြီးတွေကိုစည်းရုံးပြီး၊ ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းဟာ Saitama စီရင်စု Sakado မြို့မှာရှိပေမဲ့၊ ဒီနေရာမှာတော့ Food Pantry ကိုပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
“ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ကိုယ်ကိုတိုင်ကပဲအစပြုရမယ်။ ကလေးတွေကိုကယ်တင်ကြမယ်” ဆိုပြီး ဦးဆုံးရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းဘက်ကလည်း ပထမကတော့ “ အထက်တန်းကျောင်းသူအရွယ်နဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး?” ဆိုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း၊ ထိုကျောင်းကပဲကျောင်းဆရာတစ်ဦးက စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီး၊ ထိုချိန်ဆက်ပေးမှုကြောင့် အခြားသောဒေသရှိ Food Pantry ကိုလေ့လာပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် ကျောင်းတံခါးအနီးမှာ Food Pantry ကိုထားဖို့ ကျောင်းဘက်ကခွင့်ပြုချက်ကိုရခဲ့ပြီး၊ အတန်းလှုပ်ရှားမှုအချိန်မှာ ပထမနှစ်နဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေကို ခေါ်ထားတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေဆီကနေလည်း စားစရာမျိုးစုံကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Hishinuma စံဟာ နောက်နှစ်ဆိုရင် တတိယနှစ်ကျောင်းသူကြီးဖြစ်ပါပြီ။
တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အတွက် စာမေးပွဲဝင်ဖြေရမယ့်ကျောင်းသူဖြစ်တာကြောင့် စာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ရာသီကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့၊
Food Pantry ကိုဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.
ကျောင်းစာလေ့လာခြင်းထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာကိုသင်ယူနေတာပဲလို့ စာဖတ်သူတို့ရောမထင်မိဘူးလား?
ဂျပန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေထဲမှာ Hishinuma စံနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Food Pantry အတွက်ပါဝင်ချင်တဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင် ဒီအီးမေးလ်လိပ်စာကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာတဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံး၊ အဲ့ဒါထက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပေါ်ထွက်လာစေချင်ပါတယ်။
သင်ရော မိမိရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုတစ်ခုခုလုပ်ပေးနေပါသလား?
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Deli service က လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀၀ မတိုင်ခင်တည်းကရှိနေပြီးသားပါ !!!